Maalinta: Meey 28, 2019
Sirkeci-Uzunköprü Khadka Km259 + 100-259 + 300 Dhexdhexaadinta Dhul-gooyooyinka Dhimista
TCDD 1. Khadka Tooska ah ee Degmooyinka Sirkeci-Uzunköprü Km259 + 100-259 + 300 inta u dhaxaysa Landslide hagaajinta Dhismaha Work Tender Result TC State Railways Maamulka 1. Agaasime Goboleed (TCDD) ayaa xaddidaya qiimaha 2019 / 220432 GCC 1.929.558,62 TL [More ...]
Kursiga Korantada ee Karsarka Kmarka Km 1361 + 900
TCDD 4. Agaasinka Gobolka ee Kars Line Km. Agaasime Goboleed (TCDD) ayaa xaddidaya qiimaha 1361 / 900 GCC 4 TL [More ...]
Xawaaraha Speed ​​ee Göbeklitepe ee Şanlıurfa
Duqa Magaalada Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül, iyo Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy, ayaa ka qeybgalay socdaalkii Göbeklitepe iyadoo ay la qaateen ciyaartooy ku dhex leh “Xiriirka Saaxiibtinimo ee Reer-Galbeedka / Bariga-Galbeedka”. Ku dhawaaqida 2019 sida Sanadka Göbeklitepe [More ...]
Maalinta Koowaad ee Ciidda ee Malatya Bus iyo Trambus Free
Basaska iyo taraamyada ay leeyihiin MOTAŞ ee Malatya Metropolitan Dowlada waxay adeegyo bilaash ah ku bixin doonaan qadka dhammaan Malatya, gaar ahaan maalinta koowaad ee Ramadaan. 4-6 Juun 2019 ayaa loo dabaaldegi doonaa inta udhaxeysa [More ...]
20 Milyan Euro maalgashiga Boztepe
Dowladda Hoose ee Magaalada Ordu waxay maalgelisay ku dhawaad ​​20 milyan ginni si ay u kordhiso soo jiidashada Boztepe. In kasta oo waddada Boztepe la ballaariyey, jardiinooyinka xiisaha leh iyo tas-hiilaadka dalxiis ee dhismahoodu uu dhammaadka masraxa ku darey midab ka duwan kan gobolka. ciidan [More ...]
Adeegyada Dayactirka Teleferikte ee Boosaaso, Done, Uludağ ayaa bilaabay Duulimaadyada
Uludag by baabuur cable in ay noqon mid ka mid ah ugu xarumaha Turkey ee dalxiiska muhiim ah oo xilliga qaboobaha iyo dabeecadda kuwaas oo bilawnaana doonaa news yimid dhamaadka saddex toddobaad. 140 xayndaabyada waxay qaadi karaan kumanaan rakaab ah 500 saacadiiba, oo wata kiiloomitir 9 [More ...]
Lacagtii taksiga garoonka diyaaradaha ee Istanbul ayaa lagu dhawaaqay bishii Abriil. Shalay, madaxa Rugta farshaxanka ee Istanbul Taxi Eyup Aksu Madaxweyne Erdogan ayaa sheegtey inay lahadleen furitaanka taxi-ga dhamaadka dhamaadka bisha June laga bilaabo 4 TL [More ...]
Tareenka On Tareenka ee Sivas
Sivas, Hanli, Bostankaya station oo u dhexeeya dhismaha tareenka socda ee tareenada ee socda, ayaa mashiinka dhismaha ku dhuftey. Sida laga soo xigtay xogta laga helay shilkii dhismaha ee tareenka joogtada ah ee udhaxeeya tuulada Hanli-Guzman ee magaalada Sivas [More ...]
RayHaber 28.05.2019 Warbixinta Shirka
Qalabka Birta iyo Birta ee la Iibsanayo (TÜDEMSAŞ) Diyaarinta Mashaariicda dib-u-xoojinta ee Dhismaha Van Station iyo Saldhigga Da'yarta Sida ku xusan Awooda Dhulgariirrada [More ...]
Caqabadaha xagjirnimada ee Aegean iyo Marmara ayaa looga dooday Bandhigga Dhaqanka ee Kadikoy
Bandhigga Deegaanka Kadıköy, oo sanad walba ay abaabusho Dawladda Hoose ee Kadıkö iyo hal-ku-dhigga 'Sii shaqo si dabiiciga ah', ayaa sannadkan loo dabaaldegay May, 24-26 iyadoo la adeegsanayo dulucda 'Ciidda' ee Selamiçeşme Park Park. Ku saabsan dagaalka 60 ee deegaanka [More ...]
Qalabkii Yavuz Sultan Selim Bridge ee Garanti Bixinta
Yavuz Sultan Selim iyo qeybaha waqooyiga Perimeter-ka ee adeegga, shirkadda ka shaqeysa gobolka si ay lacag u siiso shirkadda dammaanadda waxay xisaabta ku daraysaa heerka doollar laba maalmood oo kala duwan. Qeybtii hore ee sanadka [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay ka dhigeysaa iskuxirnaanta gaadiidku wax ku ool ah mashruucyo cusub oo magaalada ka socda iyadoo la dayactirayo laguna hagaajinayo waddooyinka. Macnaha guud, dadka wax fasaxa ah waxay muujiyeen xiise weyn gaar ahaan xilliga xagaaga [More ...]